नायक पल शाह किन गएनन् त नायिका आँचल शर्मा को विहेमा यस्तो छ कारण ! « Online Tv Nepal
नायक पल शाह किन गएनन् त नायिका आँचल शर्मा को विहेमा यस्तो छ कारण !
Published : 13 March, 2020 1:00 pm
पल शाह ललितपुरको गोदावरीमा एउटा म्युजिक भिडियोको सुटिगंमा ब्यस्त रहेका थिए । उनले त्यो कुरा सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराएका छन् । उनले फेसवुकमा लाइभ आउँदै आफु दिनभर ब्यस्त भएको बताएका थिए । उनलाई फेसवुक लाइभमा आउँदा आँचलको विवाहमा किन नजानुभएको हो ? तपाईलाई आँचलले निम्ता कार्ड पठाएकी थिइनन् ?
भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै पलले आफु दिनभर ब्यस्त भएका कारण आफु जान नपाएको बताएका छन् । उनले आँचलले आफ्नो विवाहको निम्ता कार्ड भने पठाएको पनि बताएका थिए ।